MMADỤ OLE BI NA HA 994,839,242
NDỊ NKWUSA OLE NỌ NA HA 1,421,375
MMADỤ OLE A MỤỤRỤ BAỊBỤL 3,516,524
Ha So Onye Nkụzi Ha Gaa Ọmụmụ Ihe
Otu nwa okorobịa aha ya bụ José bi n’ebe na-emepeghị emepe na Luanda, dị n’Angola. Ọ bụ ọsụ ụzọ ma na-akụzi nkụzi n’otu ụlọ akwụkwọ dị nso n’Ụlọ Nzukọ Alaeze anyị. Ụmụ akwụkwọ ya dị iri asatọ na isii hụrụ ya n’anya ma na-akwanyere ya ùgwù n’ihi na ọ ma ihe akụzi, na-akpakwa àgwà ka Onye Kraịst. Ọgbakọ ọ nọ na ya na-enwe ọmụmụ ihe etiti izu n’elekere anọ nke mgbede. N’ihi ya, onyeisi ụlọ akwụkwọ ha kwere ka ọ na-emechi n’oge n’ụbọchị ọmụmụ ihe ha. Ọ na-abụ o mechie, ya agawa n’Ụlọ Nzukọ Alaeze ozugbo.
Ọ na-eju ụfọdụ ụmụ akwụkwọ ya anya ihe mere José ji emechi n’oge, nakwa ebe ọ na-adị aga. Otu ụbọchị, ụmụ akwụkwọ ya abụọ so ya gaa ọmụmụ ihe ka ha mara ihe kpatara ya. Ka oge na-aga, ụmụ akwụkwọ ya atọ ọzọ so ya gaa ọmụmụ ihe n’ụbọchị o nwere ihe omume ná Nzukọ Ije Ozi. Tupu a mara ihe na-emenụ, ụmụ akwụkwọ ya niile anụla gbasara ya. Ka izu ole na ole gachara, ụmụ akwụkwọ ya dị iri abụọ na otu na-esozi ya aga ọmụmụ ihe. Ụmụnna nọ n’ọgbakọ ahụ gwara ha ka ha na ha mụwa Baịbụl. Ọtụtụ n’ime ha kwetakwara. Mgbe ụmụ akwụkwọ ahụ bidoro iji akwụkwọ anyị na-aga ụlọ akwụkwọ, ọtụtụ ndị nwekwuru mmasị ma bido ịbịa ọmụmụ ihe. Tupu ụlọ akwụkwọ ana-emechi n’afọ ahụ, ụmụ akwụkwọ ya iri ise na anọ abịala ọmụmụ ihe anyị. Nwanna José kwuru na mmadụ iri abụọ na atọ n’ime ha ka na-abịa ọmụmụ ihe, ha na-emekwa nke ọma n’ọgbakọ.
Ọ̀ Bụ Eziokwu na Ókèala Ha Ebughị Ibu?
Naịjirịa: Ebe Nwanna Joseph na nwunye ya Evezi na-egosi ụmụaka fim anyị n’ozi ọma
Nwanna Joseph na nwunye ya Evezi bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche na Naịjirịa. Mgbe ha rutere n’ebe e zigara ha, ọtụtụ ndị nkwusa ije ozi ọma n’ókèala ahụ gbụrụla gwara ha, sị: “Ókèala anyị ebughị ibu. Anyị arụkarịala ya.” Mgbe Nwanna Joseph jere ozi ebe ahụ otu afọ, o degaara alaka ụlọ ọrụ anyị akwụkwọ ozi, sị: “Anyị na-ekwusa ozi ọma n’ókèala anyị kwa ụbọchị. Nke a emeela ka ndị kpọrọ anyị asị na ndị na-anaghị egebu anyị ntị, gewe anyị ntị. Mụ na nwunye m na-eji obere diiviidi aga ozi ọma ka anyị jiri ya gosi ụmụaka, ndị na-eto eto, na ndị dimkpa vidio anyị. N’ihi ya, n’ọnwa ọ bụla, mụ na nwunye m na-amụrụ mmadụ iri na asatọ Baịbụl. Mgbe ụfọdụ, anyị anaghị agazu na nke ndị niile anyị na-amụrụ ihe. Ọ na-abụkwa ụmụaka hụ anyị, ha asị anyị gosi ha ‘fim Kelechi.’”
Ndị Bi n’Otu Agwaetiti Rịọrọ Ka A Bịa Nyere Ha Aka
Kongo (Kinshasa): Ebe otu nwanna na nwunye ya na-ezi onye na-akụ azụ̀ ozi ọma
Alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Kongo (Kinshasa) natara akwụkwọ ozi na-emetụ n’ahụ́ n’Eprel afọ 2014. Ndị dere ya bụ ndị na-akụ azụ̀ bi n’ebe a na-akpọ Ibinja, nke dị n’Ọdọ Mmiri Kivu. Ndị a na-akụ azụ̀ na-agakarị n’obodo ndị dị nso azụ ahịa. Otu ụbọchị ha na-aga n’obodo a na-akpọ Bukavu, ha hụrụ Ndịàmà Jehova. Ndịàmà Jehova ahụ ziri ha ozi ọma, nye ha Baịbụl na akwụkwọ anyị ụfọdụ.
Ihe ha gụtara n’akwụkwọ ndị ahụ tọrọ ha ụtọ, ha amalite ịkọrọ ndị ọzọ ihe ha mụtara. Ọtụtụ ndị nwekwara mmasị n’ihe ha na-akọrọ ha. N’ihi ya, ndị ahụ na-akụ azụ̀ zigara otu n’ime ha ka ọ laghachi Bukavu gwa Ndịàmà Jehova ka ha bịa n’Ibinja mụwara ha Baịbụl. Nwoke ahụ ha zigara ahụghị Ndịàmà Jehova. N’ihi ya, o degaara alaka ụlọ ọrụ akwụkwọ ozi, sị: “Biko, ziterenụ anyị Ndịàmà Jehova ka ha nyere anyị aka ka anyị mara Baịbụl otú ha ma, nakwa ka anyị nwee ike mụta ihe anyị ga-eme ka anyị dịrị ndụ ebighị ebi. Anyị ga-enye ha ebe ha ga-ebi. M ga-enyekwa ha ala ha ga-arụ ụlọ ụka. Mgbe anyị gụchara amaokwu Baịbụl ndị dị n’akwụkwọ ndị ahụ unu nyere anyị, anyị ghọtara na ndị ụkọchukwu anyị na ndị pastọ anyị anaghị akụziri anyị eziokwu. O doola anyị anya na anyị achọtala okpukpe na-akụzi eziokwu. Ọtụtụ ndị bi n’Ibinja chọrọ ịmụ Baịbụl ma ghọọ Ndịàmà Jehova.”
Akwụkwọ ozi ahụ kwuru na e nwere ihe dị ka mmadụ iri anọ chọrọ ịmụ Baịbụl n’obodo ahụ. Ma, e nweghị otu mkpụrụ Onyeàmà Jehova n’ime ihe karịrị puku mmadụ iri na asatọ bi n’Ibinja. Ozugbo alaka ụlọ ọrụ anyị natara akwụkwọ ozi a, ha zigara ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche abụọ n’ebe ahụ. Ha abụọ na-asụ asụsụ ndị obodo ahụ.
Pastọ Ahụ Na-egezi Ntị n’Ozi Ọma
Mgbe otu pastọ a ma ama na Saụt Afrịka gachara Ncheta Ọnwụ Jizọs e mere n’Eprel 2014, ọ sịrị: “M gaghị akwụsị ịga Ncheta Ọnwụ Jizọs.” Gịnị mere pastọ a ji gaa Ncheta Ọnwụ Jizọs? Otú o si mee bụ na e nwere otu ụbọchị ụmụnna nwoke abụọ na-esighị n’otu agbụrụ bịara ozi ọma n’ụlọ ya. Tupu ha abịa na nke ya, ha ma na ọ naghị egecha Ndịàmà Jehova ntị. Nwanna Adaine so na ụmụnna nwoke abụọ ahụ bịara na nke pastọ a. Ọ sịrị: “Mgbe anyị kụrụ aka n’ụzọ ya, o mepere ụzọ sị anyị bata. Ihe a o mere juru anyị anya. Anyị na ya kparịtara ụka ọtụtụ awa. O juru pastọ ahụ anya na onye ọcha bịara n’ebe hanwa ndị isi ojii bi jiri asụsụ yanwa bụ́ onye isi ojii na-ezi ya ozi ọma. E bidoziri ịna-amụrụ pastọ ahụ Baịbụl kwa izu.”
Nwanna Adaine sịkwara: “Ọ karịala afọ iri anọ nwoke ahụ bụwara pastọ. Ma ọ bụ ugbu a ọ dị afọ iri asatọ ka ọ matara azịza ajụjụ ndị o nwere. Akwụkwọ Ṅomie Okwukwe Ha na-atọ ya ezigbo ụtọ. Mụ na ya mụchaa ihe, ọ na-eji ihe ụfọdụ ọ mụtara kụziere ndị chọọchị ya. O gosiri ndị chọọchị ya akwụkwọ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ gwara ha, sị, ‘Mgbe ọ bụla Ndịàmà Jehova ji akwụkwọ a bịa n’ụlọ unu, nabatanụ ha ma gee ha ntị nke ọma n’ihi na unu ga-amụta ọtụtụ ihe gbasara Chineke na ya.’”
Pastọ ahụ gwara Nwanna Adaine na ndị chọọchị ya dọsiri ya aka ná ntị ike banyere Ndịàmà Jehova ma gwa ya ekwutekwala okwu ha ọzọ ma ọ kụziwe ihe na chọọchị. Pastọ ahụ kwuru na ya amaghị ihe ya ga-eme eme. Nwanna Adaine chetara otu ihe a kọrọ n’Akwụkwọ Mgbaafọ Ndịàmà Jehova nke 2013. Akwụkwọ a kọrọ banyere otu nwoke bụbu onye ụkọchukwu na Mianmaa. Mgbe Nwanna Adaine gụpụtaara ya ihe a kọrọ banyere nwoke ahụ, pastọ ahụ, sịrị: “Ọ dị nnọọ ka ọ̀ bụ m ka a kọrọ gbasara ya ebe a. Ekwesịrị m ikpebi ihe m ga-eme. Agaghịzi m egbu oge.”
Pastọ ahụ gara Ncheta Ọnwụ Jizọs nke mbụ ya n’abalị iri na anọ n’ọnwa Eprel, afọ 2014. Ọ bụ mgbe ahụ ka o kwuru na ya agaghị akwụsị ịga Ncheta Ọnwụ Jizọs. O kwuokwala na ya ga-esepụ aka n’ihe ọ bụla gbasara okpukpe ụgha.
Ikwusa Ozi Ọma n’Ọgbọ Koko
Gana: Ebe Nwanna Baffour na Nwanna Aaron na-ezi otu nwaanyị ozi ọma n’ọgbọ koko
Nwanna Baffour na Nwanna Aaron bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche na-eje ozi na Bokabo, nke dị n’ebe ọdịda anyanwụ Gana. Ihe e ji mara ya bụ na ọ bụ ebe a na-akọ koko. Ụmụnna abụọ a nwere ọtụtụ ókèala ha na-eje ozi na ha. A rụkọtaghịkwa ụlọ ndị dị n’ókèala ha ọnụ. Ha gawa ozi ọma, ha na-esi n’awara ụzọ ndị dị rịgọ rịgọ dị n’ọgbọ koko aga. Mmadụ nwere ike ifu ụzọ ma o tinye isi n’ụzọ ọ na-amaghị. Otu ụbọchị, ndị ọsụ ụzọ abụọ a tinyere isi n’ụzọ ha na-esitụbeghị gaa ozi ọma. Mgbe ha na-aga, ha hụrụ ụlọ akịrịka ndị ha na-agatụbeghị zie ozi ọma. N’otu n’ime ụlọ ndị ahụ, ha hụrụ otu nwoke aha ya bụ Michael na nwunye ya Patience. Ha gere ụmụnna abụọ a ntị nke ọma, ma kwere ka a mụwara ha Baịbụl. Michael mechara gwa ha, sị: “Ihe a bụ afọ abụọ anyị kwụsịrị ịga chọọchị n’ihi na ihe ha na-akụziri anyị dị iche n’ihe Baịbụl kwuru. Kemgbe ahụ, mụ na Patience na-amụ Baịbụl ná mgbede ọ bụla, na-achọ azịza ajụjụ ndị anyị nwere na Baịbụl. Anyị na-ekpekwa ekpere ka Chineke nyere anyị aka ka anyị chọta okpukpe na-akụzi eziokwu.” Ha malitere ịbịa ọmụmụ ihe anyị ozugbo n’agbanyeghị na ha na-esi ebe dị anya abịa. E mere di na nwunye a baptizim n’oge na-adịbeghị anya. Ha bidokwara ịsụ ụzọ oge niile. Hanwa kwa na-esi n’ụzọ ndị ahụ dị n’ọgbọ koko aga achọ ndị ‘na-ekpekwa ekpere ka Chineke nyere ha aka ka ha chọta okpukpe na-akụzi eziokwu.’
Ihe a bụ ebe Nwanna Michael na nwunye ya si n’ụzọ dị n’ọgbọ koko na-aga ozi ọma